Skype Android ? Skype For Android Tablet
Kurume 27, 2021 na Nhungamiro Yedzidziso Siya Revo
Microsoft kunozivikanwa somumwe rokumavirazuva mutengi vaifarira Software kambani. Zvagara raparurwa zvirongwa zvinogona kuunza zvakanaka uye kurerukirwa kuti vanoshandisa ayo. Kugara chokuita nyika, kuita mameseji uye kuitisa vhidhiyo kana zvakarekodhwa zvinoda, Microsoft akaita rakagadzirirwa wayo guru yepamutemo Anwendung kuzivikanwa sezvo Skype nokuda kwayo Android vanoshandisa.
skype Android piritsi
Maererano neongororo, kupfuurisa 250 mamiriyoni vanozvishandisa vari kushandisa Skype sechekushandisa kutaurirana kwavo. Uye nhamba vanoshandisa kuwedzera zuva roga roga nokuda kwayo nyatsoshanda chaitwa. Anwendung ichi Microsoft inoita kuti interconnect kunomumwe vanoshandisa uchishandisa Skype. Imi chete vanoda zvakanaka Internet kubatana kana cellular Data kupinda munyika aiita kuti Skype.
Your Android dzeserura vanogona kurega iwe kutaura munhu unoda asi tichibatsirwa Skype, iwe kunogonawo mavhidhiyo aiita vamwe vanoshandisa. Ichi Anwendung chinokosha ndiko revolutionize kuwedzera kuti Android vanoshandisa. Kana uchida kuti mutungamiriri rakakwana Skype nokuda Android vanoshandisa, ayo urongwa uye kushandiswa, zvayo kunoshamisa zvinhu uye kukwikwidzana pamupendero zvino rambai kuverenga nyaya iyi inobatsira.
Kudhanilodha Skype nokuti Android
Unogona effortlessly kuwana Skype ichi chikuru Anwendung uri Android mano nokutevera matanho nyore
Enda kutamba chitoro uri Android namano uye Search nokuti Skype kana Download kubva Link dzakapiwa HERE.
Click on gadza bhatani nokuti kudhanilodha uye kuisa Skype.
Kamwe iwe ndakagadza Anwendung yako, ikozvino baya uye kuwana vakanyorwa ari Anwendung
You vanofanira kupinda kwako tsambambozha nhoroondo uye pasiwedhi.
Unogona kushandisa aripo nhoroondo asi kana usina zvino waita mutsva.
Sarudzai yenyu Skype Name, iyo inoshandiswa rako Skype ID kutanga kudana.
1 Skype Login inowanikwa:
1.1 wedzera Contacts & Ita Call
1.2 Zvinoumba Skype:
1.3 High-Quality Video & Audio Inokumbira:
1.4 Chinovhara Kugoverana musi Skype
2.0.1 Yemakwikwi Kunogumira Skype:
3 Skype nokuti mano zvose:
3.0.1 Skype vose paIndaneti uye is zvinoda
3.2 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Skype Login inowanikwa:
wedzera Contacts & Ita Call
Nokuti achiwedzera contactsGoogle musi Skype, uchaona remadziro rinoratidza zvose vanozvishandisa vari kare kushandisa Skype uye kunoenderana kuchikwama chenyu e-mail. Imwe nzira iri unogona shoko kana kuti e-mail munhu kushandisa Skype uye anogona kuwedzera zvavo Skype ID kutanga kudana mumwe.
Unogona kuwedzera chero kuonana nevanhu yaakasarudza Wedzerai vanhu pamusoro chikuru menu Skype. Unogona kuwedzera runodiwa vanoshandisa nokungonyepedzera kunyora yayo Skype Username uye nekudzvanya pamusoro kuwedzera vokukurukura. Mukuwedzera iyi, unogona kuitawo mazita enyu zvikuru kushandiswa kuonana nokuwedzera navo yenyu Wedzera kufarira kwaiita zvinhu. Unogonawo kumisa kana kubvisa kuonana wako zvakavanzika uye kuchengeteka nyaya.
Skype neMicrosoft ari kushumira vatengi dzaro yokukosha vavariro kuti inoti vanoti Hi vose munyika.
Pfungwa shure kutapudzwa daro uye kuti mupfungwa isina vanhu kuramba chokuita. Izvi zvinobatsira chaizvo kuti tirambe kwakabatana mhuri yako nemasangano kana haugoni panyama kutaura navo.
Skype ane hombe mazita kugutsikana vatengi. Zuva nezuva, mamiriyoni evanhu vanoshandisa Skype kuti Chat kana kudana vamwe vanhu. Skype ari kupa nevamwe zvinhu kusanganisira.
High-Quality Video & Audio Inokumbira:
Skype ari nenjere zvipe rokumavirazuva yepamusoro mavhidhiyo uye makaseti foni mibairo vatengi ayo. Unogona yakajeka vhidhiyo uye ekuteerera unodana rose.
Yakanakisisa ndechokuti, Skype anopa kwayo optimum unhu zvabuda vose kuti munhu mumwe inoti kana boka vachidzifudza. Unofanira nechokwadi chokuti uri kushandisa zvakanaka paIndaneti kubatana kudzivisa chero zvinovhiringidza mumavhidhiyo yako kana zvakarekodhwa zvinoda.
Chinovhara Kugoverana musi Skype
Uyu unobatsira chaizvo kuchiitwa zvaipiwa Skype. Achibatsirwa chinovhara kugoverana, unogona nyore kuudza mharidzo dzenyu, mifananidzo, zvinyorwa kana chinhu munguva kufona.
Izvi zvikuru kunobatsira kuti chepamusoro nyika. Vashandi vanogona kugoverana mafaira kana magwaro avo anokosha, ratidza mharidzo, purojekiti mashoko, mufambiro ongororo, zvinodiwa nemhosva uye anogona kugadzirisa nyaya munguva dzavo vachidzifudza.
Kana uchida kuvanza dzevakurukuri yako kana zvinoda chero kuchengeteka kana pachavo zvikonzero, zvino unogona kuita izvi nyore kuburikidza Skype. Anwendung Izvi zvinoita kuti kukurukurirana voga vane mugumo kusvikira pakuguma encryption muitiro.
Vanyore yenyu vachidzifudza:
Skype inokupai kuti vanyore rako vhidhiyo kana zvakarekodhwa zvinoda. Izvi zvinobatsira kana uchida kunyora mashoko kana nguva ipi inokosha. Zvinoitawo zvinoyamura pakudzidza uye richitaura pasi zvaunonyanya panoitwa uchiri vachidzifudza.
Nyaya iyi mabasa nokuda chepamusoro nyika, kana uchida kuteerera zvakare yako murayiridzi kana bhasi zvekutevedzera, unogona kuzviita nyore nokuona kurekodha enyu vachidzifudza.
Yemakwikwi Kunogumira Skype:
Skype ave achishumira vatengi yacho kupfuura 10 makore. Microsoft ari Rafa pamusika ichi yemakwikwi akaita kugadzirwa ichi Vhidhiyo runhare App kuti inoshanda zvakawanda zvinhu izvo vamwe vakwikwidzi akafanana chiso nguva, Google vaviri, nezvimwewo. vasiri hurukuro. Ichi ndicho chikonzero kuti Anwendung ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru kushandiswa Apps rose. The akakurumbira kwikwidzana Pakanzi kunosanganisira
Skype nokuti mano zvose:
nyonyova, Skype chakagadzirirwa kuti Android User kusanganisira Android maserura, Android mahwendefa, uye nezvimwe Android Apps. Asi zvinofadza ndechokuti Skype zvinogona kushandiswa pane zvimwe zvinhu zvose sezvo kusanganisira Microsoft Windows zvakanaka, Linux, Macintosh, Blackberry, uye Apple zvose mahwendefa uye smartphones. Kana muine mudziyo unotofanira kudhanilodha Skype uye vanogona zvikuru vatambi Video nvidia Apps.
Skype vose paIndaneti uye is zvinoda
Chimwe kukwikwidzana chinhu ichi chikuru Skype app iri haugoni chete kudana vanhu vari paIndaneti asi kunogonawo kudana kuti chokuita nevanhu vasina mukana wokushandisa Indaneti. Skype ari unoda ichi shoma anopa vanoshandisa aro muchiparidzira Mobile nhamba uye pafoni nhamba.
Nokuti kwese paIndaneti zvinoda, haumanikidzwe kubhadhara chinhu. Zvaunongoda yako paIndaneti riine kuisa kudanwa. Asi nokuti kushanyira nhamba dzenhare kana pafoni nhamba, Skype akapa mari chaizvo kuzvinyoresa kune vanoshandisa ayo. Other vakakurumbira kubatsira Skype nokuti vanoshandisa ayo
Unogona kuisa panodana mhuri yako, nevamwe kana shamwari pose pasi pose. Skype ari kupa chaizvo Mari-inobudirira kudanwa Rongai kunyika dzakasiyana munyika yose.
Kuwedzera Android vanoshandisa, izvi zvinhu kushandiswawo ose mudziyo kusanganisira Desktop, iPhone, Xbox, OSX uye zvakawanda
Skype anobvumira makasitoma ayo vakawanda nzira kuripira magazini kusanganisira Visa, Master kadhi, JCB, PayPal, chitoro, Apple In-App Purchase, American Express, Western Union uye zvakawanda
Zvichiitika nyore chaizvo. Unongofanira kubhadhara chipeto, uye ipapo kukopa Skype Anwendung uye kutanga ichishevedzera yakanaka Video nvidia Software.
Kuti Skype-to-pafoni anodana Skype kushandisa kwako Android foni uchada Skype chikwereti.
Dzvanya pane iyo Skype kiredhiti link kuwedzera Skype chikwereti kuchikwama chenyu.
Kana usina Skype chikwereti uye muri kuedza kuita Skype-to-pafoni runhare, Skype ichakutumira iwe pop-up kumusoro-kumusoro account yako.
Unogona kuwana pamwedzi Skype chipeto kana unogona top-up uchishandisa imwe-kure kubhadhara.
Akamisa pamwedzi chipeto, kana Skype rinoshandiswa wenyu mazuva ose dzomunyika zvinoda. Iwe uchazoda kiredhiti kadhi yeiyo kunyorera maitiro.
Sarudza huwandu hwechikwereti che Skype chaungade kuwedzera uye tinya 'Ramba'.
Click on mabhokisi asina chinhu uye kutanga achizadza yenyu Billing mashoko vakanyorwa yako debit kadhi.
Kutenga yako chikwereti uye iwe vakagadzirira kushandisa Skype.
Zvino iwe Ndatenga vamwe Skype chikwereti unogona kutanga kudana pafoni nhamba kana maserura.
Kutanga, tinya pane icon yefoni sezviri kuratidzwa pazasi mumufananidzo.
Dial nhamba uchida kutaura VaGumbo bumbiro nhengo munyika uye Click on Call Button.
Ugoisa kana iwe anoitwa ne foni yako.
Kuti kuwedzera pafoni nhamba Click pamusoro 'Add nhamba' wobva waisa iyo landline nhamba iwe yaunoda kuwedzera kune yako runyorwa.
Unogona kutenga yako yega Skype nhamba pamubhadharo mudiki uyo unobatsira kune chero munhu kuti akufonere kune asiri kutove paSkype.
Achitarisira kuti iwe ndakagadza ari Skype Anwendung zvinobudirira. Kana uri kutarisana chero dambudziko, inodonha nyaya yako mhinduro bhokisi. queries Your zvichapedzwa nekukurumidza. Tsoka dzose nokuchengeta murefu, iwe zvirokwazvo uchakwanisa kushandisa Skype zviri nyore kwazvo.
Download Wyze App for PC Free Window 7, 8 uye 10
LG Bridge YePC Windows 10/8/7 - Yemahara Kurodha Nyowani Shanduro
MSI Live Kwidziridzo yePC Windows 10/8/8.1/7 - Dhawunirodha Dzazvino Shanduro
Yakazodzwa Pasi: Download Facetime